Baolina kitra - Fanazarantena :: Hiverina an-kianja ny klioban’ny Fosa Juniors • AoRaha
Baolina kitra – Fanazarantena Hiverina an-kianja ny klioban’ny Fosa Juniors
Hiverina hiakatra kianja indray ireo mpilalaon’ny klioba Fosa Juniors, taorian’ny nanambaran’ny Filohan’ny Repoblika amin’ny fahafahan’ireo atleta manao fanazarantena, tamin’ny alahady alina lasa teo. Hanomboka amin’ny faran’ity volana ity ny fampivondronana voalohana an’ireo mpilalaon’ny Fosa Juniors rehetra, taorian’izay dimy volana nitsaharana noho ny hamehana ara-pahasalamana izay.
« Tsy mora ny fiverenana an-kianja. Mila mametraka fepetra matotra satria hihaona indray ireo mpilalao. Hisy, ohatra, ny fitiliana hatao amin’izy ireo, mialoha ny fanazarantena. Hojerena ireo fomba fisorohana hafa araka ny takian’ireo rafitra iraisampirenena (Fifa sy CAF) », hoy Rasoanaivo Titi, mpanolotsaina teknika ao amin’ny Fosa Juniors.
Tsiahivina fa mitazona ny anaram-boninahitra amin’ny maha tompondakan’i Madagasikara farany azy ny Fosa Juniors, rehefa nijanona teo amin’ny andro faha-15 ny taom-pilalaovana ho an’ny fifaninanam-pirenena « Orange Pro-League », raha tsy misy fiovana. Ity klioba avy any Mahajanga ity no tokony hisolo tena an’i Madagasikara eo amin’ny fifaninanan’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, amin’ny taompilalaovana 2021.
Taranja haiady :: Horaisintsika ny fifaninanana tolona ho an’ny ranomasimbe Indiana
Famerenana katsa-bato :: Mihantona noho ny fifidianana loholona ny an’ireo kaominina sasany